Waxaa socda daraasad lagu samaynayo qorshe dib loogu dhisayo goobihii burburay ee deegaanka Axmaarada - ዜና ከምንጩ
Waxaa socda daraasad lagu samaynayo qorshe dib loogu dhisayo goobihii burburay ee deegaanka Axmaarada
Dowlada deegaanka amxarada ayaa qorsheynaya in diyaarada dagaalka ay ku bedesho dowladda federaalka
Golaha Wakiilada Wararka ayaa sheegaya in ka dib markii uu dagaalku ku fiday deegaanka Tigreega ilaa deegaanada Axmaarada iyo Canfarta ay kooxda TPLF bililiqo iyo burburin u geysatay hanti dawladeed iyo mid gaar ah oo ku yaalay dhulka ay so werartay.
Dawladdu waxay ku dhawaaqday in ay ka baxday deegaanadi ay kooxda TPLF ku sugnayd intii uu socday weerarka.
Kadib ka bixitaankii kooxda TPLF ee deegaanka Axmaarada oo muddo bilo ah go’doomin ku jirtay ayaa xukuumada deegaanka waxay u saartay guddi u xilsaaran sidii ay u samayn lahaayeen daraasad faahfaahsan oo dib loogu dhisayo goobihii burburay.
Waxa uu sheegay in qorshaha dib u dhiska ee ku saleysan natiijada daraasadka la diyaarin doono isla markaana la dhaqan gelin doono marka ay dhamaato daraasadka
Waxaa la ogaaday in dowladda federaalka iyo dowlad deegaanka ay qarashka ku baxaya dib u dhiska xarumaha burburay ay ku bixinayaan qorshaha dib u dhiska iyadoo daraasadaas laga duulayo.
Waxaa durba la isla dhexmarayaa in dhaqaalaha iyo waqtiga loo baahan yahay in lagu soo celiyo burburkii hay’adaha dowladda iyo kuwa gaarka loo leeyahay inta lagu guda jiro howlaha dib u dhiska.
Waxaa la tilmaamay in qorshaha dib u dhiska ee la soo jeediyay uu sahlayo in sida ugu dhaqsiyaha badan dib loogu soo celiyo adeegyadii aasaasiga ahaa, isla markaana lagu guda jiro dib u dhiska hay’adihii aan lagu dhisi karin muddo kooban.
Kadib duullaankii kooxda argagixisada ee TPLF ay kuqaadatay qaybo kala duwan oo kamid ah deegaanka ayay xukuumada deegaanka kusoo rogtay xaalad deg deg ah waxayna albaabada isugu dhufatay xarumihii dawlada ee kabaxsanaa qaybta adeega bulshada.
Iyadoo laga duulayo go’aanka maamulka deegaanka, misaaniyad ka baxsan adeegyada aasaasiga ah sida maaliyadda, korontada, biyaha iyo wixii la mid ah waxaa loo weeciyey olole dagaal.
Deegaanku waxa uu sidoo kale mamnuucay bixinta adeegga goobta iyo gunnada, marka laga reebo adeegyada muhiimka ah inta lagu jiro sannad-maaliyadeedka.
Waxa uu sheegay in dowlad deegaanka ay ka shaqeyn doonto sidii loo bedeli lahaa kharashaadka ku baxaya dagaalka ay kula jiraan dowladda federaalka ah ee ku maqan miisaaniyada 2014-ka.
Sidoo kale waxaa la sheegay in loo baahan yahay misaaniyada si ay u howlgaliso, dib u dhis ugu sameyso xarumaha dowladda ee burburay.
Dadaalka loogu jiro dib u dhiska goobihii lagu dagaalamay ayaa waxaa muhiim ah in la helo adeegyada aasaasiga ah ee hay’adaha dowladda.
Waxa la sheegay in deegaanku aanu qaadin cashuurtii dakhliga ee uu ka qaadi lahaa dhulalka la haysto sanad miisaaniyeedka.
deegaanka Axmaarada ayaa sanad walba miisaaniyadiisa dhan 80.1 bilyan Birr, iyadoo 43 bilyan oo birr ay u qoondaysay dawlada dhexe.
Deegaanku waxa uu miisaaniyada inteeda kale ka dabooli doonaa dakhliga cashuuraha, horumar waara iyo deymaha shisheeye.
Total views : 7538197